Ukutshintsha imvelaphi yedesktop kwiMac OS X
Abasebenzisi bamandla bayathanda ukwenza ii-Mac OS X Desktops zabo njalo, ngombala wemenyu, le mvelaphi, kunye nokusetyenziswa kweDock. Iindidi ezingezizo ezekhompyuter azinakuqonda nje ukubaluleka kokulungiswa okufanelekileyo kwendawo yakho yokusebenza ebonakalayo: Xa izinto ziqhelekile kwaye zilungelelaniswa neemfuno zakho, unemveliso ngakumbi, kwaye izinto zenziwa ngokukhawuleza. Ngapha koko, ukuba usete abasebenzisi abaninzi kwikhompyuter yakho phantsi kweMac OS X, iBig X ngokuzenzekelayo igcina umkhondo weDesktop nganye yomsebenzisi kwaye iyibuyisele xa loo mntu engena. (Umzekelo, xa usebenzisa iMac, ufumana lo mfanekiso ungasemva kaFarrah Fawcett ovela kwii-70s ngelixa intombi yakho ifumana u-Avril Lavigne.) Unokuvelisa i-Desktop ekhethekileyo yeyakho.
Usenokuzibuza ukuba ngaba uyifunayo ngokwenene imvelaphi yesiko. Oko kuxhomekeke ngokupheleleyo kukhetho lwakho lobuqu, kodwa uninzi lwabanini beekhompyuter bayayitshintsha imvelaphi yabo xa banikwa ithuba. Imvelaphi oyithandayo ihlala ibandakanya
Iikhathuni ezihlekisayo kunye neefoto ezinokuzisa uncumo ebusweni bakho (nokuba lolona suku lusebenzayo)
Iifoto zosapho kunye nabahlobo (okanye i-Hollywood heartthrob yamva nje)
I-logo yenkampani (andiqinisekanga ukuba yenza lukhulu ekuziphatheni, kodwa iyamchukumisa umphathi)
Ukuba uthatha isigqibo sokuyicoca imvelaphi yakho, unokukhetha ezintathu: Unokukhetha enye yemifanekiso engasemva yeMac OS X, ukhethe umbala oqinileyo, okanye ucacise umfanekiso wakho. Yonke imvelaphi emithathu ikhethwe kwiphaneli yeDesktop kunye neKhusi leScreen, elibekwe ngaphakathi kukhetho lweNkqubo (jonga umfanekiso 1).
Umzobo 1: Ukukhetha imvelaphi, yiya kukhetho lweNkqubo.
Unokubamba kwakhona uLawulo, cofa kwiDesktop, kwaye ukhethe ukutshintsha imvelaphi yedesktop kwimenyu yokungena kwezinto (okanye ucofe ekunene, ukuba usebenzisa imouse enamaqhosha amaninzi).
Ukukhetha into Apple
Ukukhetha imvelaphi kwenye yengqokelela ebonelelwe yiApple, cofa elinye lala maqela kuluhlu olungasekhohlo:
Imifanekiso ka-Apple: Ezi mvelaphi zingagqibekanga zivela kwiipateni ezilula ukuya kwiimilo ezithile ezingaqhelekanga kunye neethereal flux.
Uhlobo: Ubuhle beScenic: iincakuba zengca, iindunduma zentlabathi, iinduli ezinekhephu. . . olo hlobo lwento.
I-Abstract: Nokuba imilo ejijekileyo ejijekileyo iyahamba, ngeli xesha ngemibala eqaqambileyo eyahlukileyo. Ilungele iofisi yengqondo.
Imibala eqinileyo: Kulabo banqwenela umthunzi oqinileyo othobayo.
Ifolda yemifanekiso: Oku kubonisa imifanekiso egcinwe kwifolda yemifanekiso ngumsebenzisi osebenzayo.
Khetha ifolda: Unokuvula ifolda enemifanekiso kwaye uyibonise endaweni yoko.
Ukuba ubona into oyithandayo, cofa i-thumbnail, kwaye iMac OS X iyibonise equleni kwaye ihlaziye ngokuzenzekelayo imvelaphi yakho ukuze ubone ukuba ijongeka kanjani. (Hi ndlela leyi, kwindalo ye-Apple, iqula yindawo ezantsi yesikwere eboniswe umfanekiso-kule meko, umfanekiso ongasemva owukhethileyo.)
Qaphela ii-albhamu zakho ze-iPhoto kuluhlu? Ayisiyongozi leyo - iTiger inikezela ngokuzenzekelayo iPhoto Photo Library yakho ukuze ukhethe imifanekiso kwiqoqo lakho le-iPhoto.
IMac OS X iyazilawula ngokuzenzekelayo ngendlela imvelaphi ebonakala ngayo kwiDesktop yakho. Ukuba umfanekiso ungqinelana nesisombululo sakho sekhusi, kulungile-kungenjalo, cofa ibhokisi yoluhlu ezantsi ecaleni kwequla kwaye unokukhetha
Tile imvelaphi. Oku kuphinda umfanekiso ukugubungela i-Desktop. (Oku kuhlala kwenziwa ngemifanekiso yeepateni ukuvelisa ukubukeka okugudileyo, okucocekileyo, okungaxutywanga.)
Gcwalisa isikrini. Oku kunokusetyenziswa ngombala oqinileyo wokufumana ukhuseleko olufanayo. Umlinganiso wembonakalo yoqobo womfanekiso ugcinwe, ke awolulwanga.
Yolula imvelaphi ukuze ilingane kwiDesktop. Ukuba umfanekiso weDesktop yakho mncinci kune-Desktop ye-acreage, kuyasebenza, kodwa ulumkiso- ukuba uzama ukolula umfanekiso omncinci kakhulu kwiDesktop enkulu, umphumo wepikseli unokoyikisa. (Cinga ngokwandisa i-Kodak Instamatic negative kwi-poster eyi-16 x 20. Amachaphaza, amachaphaza, amachaphaza.) Umlinganiso wokuqala womfanekiso awugcinwanga, ngenxa yoko unokufumana iziphumo ezibonakala ngathi zizipili ze-funhouse kwitheko lomkhosi. .
Beka umfanekiso kwiDesktop. Esi sisisombululo sam endisithandayo kwimifanekiso yeDesktop emincinci kunesisombululo sakho.
Qaphela ukuba olu luhlu luluhlu lubonakala kuphela xa umfanekiso weDesktop oyikhethileyo ingeyiyo imifanekiso ye-Apple esemgangathweni. Yonke imifanekiso ekwi-Apple Background Images, Nature, Abstract, kunye ne-Solid Colors iindidi ngokuzenzekelayo zilinganiselwe kubungakanani bescreen sakho.
Ukutshintsha imvelaphi yakho yeDesktop ngokuzenzekelayo, yenza ukuba ukutshintsha ibhokisi yokukhangela ibhokisi kwaye ukhethe ixesha lokulibaziseka kwibhokisi yoluhlu oluhambelanayo. Ukubonisa imifanekiso ngokulandelelana kwayo, yenza ukuba ibhokisi yokujonga i-Random Order; Ngaphandle koko, iMac OS X iyazibonisa ngendlela eza kuvela ngayo kwifolda.
Umthamo we-zyrtec wabantwana abangaphantsi kwe-2
Ukukhetha umbala oqinileyo
Ukuba ufuna umbala wakho owuthandayo ngaphandle kokuphazamiseka komfanekiso njengemvelaphi, unokukhetha kukhetho lwemibala eqinileyo. Unokukhetha kule mibala ngendlela efanayo ukuba uza kukhetha umfanekiso ongasemva weMac OS X.
Ukukhetha eyakho ifoto
Ungawurhuqa umfanekiso wakho equleni ukusuka kwiFumana iwindow ukongeza owakho umsebenzi wobugcisa. Ukujonga izithonjana kwifolda yonke, cofa kwiFolda yeMifanekiso (ukubonisa imixholo kwifolda yakho yeefoto) okanye ucofe kuKhetha ifolda ukucacisa nayiphi na ifolda kwindlela yakho. Cofa i-thumbnail oyifunayo ukuze uyihombise kwiDesktop yakho.
iphi icloud kuseto
Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga ze-synthroid
yeyiphi ipilisi av kuyo
leliphi inani elibalulekileyo
usulelo lomchamo wentsholongwane